Momba anay - Limited Limited an'ny Eigday Heating
Heater amin'ny hafanana any Eigdayimitedisiona teraka tamin'ny 2010 any Shenzhen. manokana amin'ny R&D, mamokatra karazan-tsakafo sy kojakoja fanatanjahantena an-kalamanjana, fanamainana ary LED vokatra fanatanjahan-tena any ivelany, Ny marika lehibe anananay dia misy SAVIOR, SAVIORHEAT, SNOW DEER ary DAY WOLF, sns. Ny vokatray sy ny kojakojanay dia nandalo UL, FCC, CE, ROHS, REACH ary namidy eran'izao tontolo izao ary manana laza tsara avy amin'ny mpanjifa sy mpifaninana eran'izao tontolo izao, izahay koa manaiky ODM & OEM kaomandy ary manampy ny mpanjifa hahatratra ny fandresena mandresy indroa.
Maninona no voafetra ny hafanan'ny EIGDAY?
Manana ekipa R&D matanjaka izahay, ny antsasaky ny injeniera manana traikefa mihoatra ny 10 taona amin'ny sehatry ny vokatra mafana, mba hahafahanay manao vahaolana arak'izay angatahan'ny mpanjifa.
Manana orinasa roa izahay. Ny iray dia ho an'ny faritra elektronika toy ny bokotra switch, singa fanafanana ary fonosana bateria ary charger, miorina ao amin'ny tanànan'i Fuyong, Distrikan'i Bao'an, misy atrikasa mahazatra 1500 metatra toradroa sy birao 1000 metatra toradroa. ao anatin'ny 10 kilometatra miala ny seranam-piaramanidina Shenzhen Bao'an. Ny iray hafa dia ny fanjairana ny ankamaroan'ny orinasa manamboatra sy manjaitra fonon-tanana vita amin'ny fonon-tànana mafana sy karazana vokatra fanatanjahan-tena azo ampiarina rehetra, any Chashan Town, Dongguan City. Izy io dia misy efitrano tsy miankina tsy miankina ary misy atrikasa fanjairana manara-penitra 2000 metatra toradroa.
Manao ski foana izahay TSY MISY MASINA FA ENJOY (Sarin-tànana ski), mpitaingina moto MIFALY NY FIAFARAN'NY VOAFITRA MIKASIKA NY FITIAVANA (fonon-tànana moto), raha toa kosa ny mpilalao golfa iray MIHIRA, SARY MAHAY (fonon-tànana Golf), mankafy ny fotoana feno amin'ny tanora ny mpikatroka. hatsembohana (fonon-tànana fanaovana fanatanjahan-tena), HEIN'NY MAFANA AVY AMIN'NY FANOMPOAN'NY VATO (Akanjo mafana), FANAFOTANA NY TONGOTRA, FANDALOANA ATAONY (ba kiraro fanafanana, insoles, kiraro), FANAMPOANA NY SUMMER TALOHA (vokatra mangatsiaka)
Ataovy izay hahatonga ny olona HALALANA NA Oviana na oviana, na aiza na aiza no teny filamatray ary hanao izany hatrany. Mitana fihetsika henjana izahay manome ny mpampiasa vokatra mahafapo, mamorona lanja avo kokoa ho an'ny mpanjifa rehetra!